Web-Site Informed Maka Pet-Care Business Owners - GridiNew - comparatif-audio.net
Web-Site Informed Maka Pet-Care Business Owners – GridiNew
Jiden’aka na ị ga-asacha akpụkpọ gị nke ọma ma kpochapụ un tupu oge ewepu creams ma ọ bụ mmanụ ọ bụla nke na-ebelata wax si na-agbasochi akpụkpọ ahụ anya.
Otun’ime omume m kwa ụbọchị bụ nke a bụ ntọala nke ndụ m na-arụ ọrụ na-etinye 1-2 awa kwa ụbọchị na kwa ụtụtụ na-enye ahụ m ahụn’ụzọ anụ ahụ website Id mmega ahụ na inye mmụọ mmụọ m echiche websiten’ịgụ ma ọ bụ ịge ntị na nkwenkwe ọ bụla. Omume a na-eme m obi ụtọ maka ụbọchị dị n’ihu.
Mgbu nwere ike belata mgbe ị na-eji nkwadebe antiseptik na-aga n’ihu. Ọzọkwa, ịgbaso ude mmiri dị jụụ nwere Aloe Vera ma ọ bụ Calamine Lotion nwere ike belata itching na ahụ erughị ala.
Akwụkwọ ozi “M” na-apụtakarị Mkpali. Must ga-enwerịrị ihe na-akpali gị ime ihe. Isi gị “Gịnị kpatara”. Kedụ ihe ị na-eme kayi ezinụlọ ihe ị na-eme? Gini only o ga eji masi gi ibido nsogbu a? Mmetụta na-ewuli ntọala nke na-eme ka ị lekwasị anya na Ọrụ Ebube gị. Obi abụọ adịghị ya! Ma ọzọ, ọ bụ ọrụ dịịrị onwe gị nke na-abụkarị ihe na-akpali gị bụ na ọ bụ naanị d e ọ ga-eme ka ị gbagan’ebe ọrụ ebube gị dị.
Mkpụrụedemede “M” pụtara Oge, tinyere nke ahụ ka ekepụtara n’akụkụ gị. Ghaghị ịmepụta oge ọ bụla nwere ike ịnwe maka onwe gị, maka Ihe kpatara ya, na ezinụlọ, maka ihe ịga nke ọma gị, na ego gị, maka ahụike gị. Ọ dịghị onye ọzọ ga-eme otu maka otu. Are not na-abụghị a Surfer na-eche onye ọzọ ife-abata. You na ị ga-ike onwe Momentum iji rụọ a ụgbọ gịn’ebe na-eke gị Ọrụ Ebube!
Na-agba ọsọ na mkpịsị aka otu ebe that a kpụchara isi un bụ usoro zuru oke iji hụ na wepu ihe dị omimi. Usoro Turkish Kayi Family Mmetụta nke imetụ aka ga-adọ gị aka ná ntị banyere ahịhịa ọka na ndagwurugwu ọ na-abụ ọkwa siri ike na enyo mgbe niile.
Kwue t rere otu ndi otu maka ịnweta ọdịnaya dị t onye (website Id isi mmalite dị iche iche) website Id ndị Canada nwere ike ị bụrụ onye ahịa t. Ebe ọ bụ d e enweghị mgbochin’ihe metụtara ebe ihe onwunwe nke onwe ya na-ejighị ya na-ejikwa ya, yana akụnụba ahụ abụghị nke ọgụgụ isi (ma ọ bụ inye ọrụ), onye ahịa America nọn’okpuru GST,n’agbanyeghị na ọ nweghị mgbe ọ bịara Canada.
Gbanwee onyonyo profaịlụ gị d e ekele gị oge ụfọdụ, tinye foto d e ọba foto gị, wee banye oge niile – nke a ga – achọpụta gị, mana ọ ga – enyere ndị ọzọ aka ị nweta ngwaahịa dị iche iche na nke kachasị ọhụrụ bụ ezigbo gị.